विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त प्रमुखमा कोइराला नियुक्त ! « MNTVONLINE.COM
विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त प्रमुखमा कोइराला नियुक्त !
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा लेखनाथ कोइराला नियुक्त भएका छन् । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा लेखनाथ कोइरालालाई नियुक्त गरेका हुन् । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बाहिरिएसँगै कोइरालालाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक बनाइएको हो ।
मंगलबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्राधिकरणका नायव कार्यकारी निर्देशक कोइरालालाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको बताइएको छ । उनलाई वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गरिएको हो । यसअघि कुलमान घिसिङले आफ्नो अनुपस्थितिमा लेखनाथ कोइरालालाई नै निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिने गरेका थिए ।